Carruurteenna iyo Af-Soomaaliga
Luuqad waxaa loo adeegsadaa in loogu yeedho wax walba oo lagu wada xidhiidho lana isku fahmo taasoo aan ku ekayn Dadka oo waxaad arki luuqadda computerka, tan xisaabaadka IWM. Laakiin gaar ahaan markaan ka hadalno luuqadda Dabiiciga ah waa tan Aadanuhu u adeegsado si uu ula xidhiidho (u fahmo loona fahmo) dhiggiisa. Luuqad waa af Shacab ka dhexeeya kaasoo dadkiisu ku hadlo, qoro, aqriyo waxna ku saxiixdo. Luuqaddu waa hanti ma guuraan ah oo dhaqan ay u leeyihiin ummadi iskagana soocaan ummadaha kale. Waa calaamad jiritaanka cidda ku hadasha. Qoraalkan yar waxaan ku eegayaa dhibka carruurteenna ka haysta Barashada Afkooda Hooyo iyo Saamaynta ay inagu keeni karto dhammaanteen.
Waan ka wada dharagsannahay sida Soomaalidu adduunka daafihiisa ugu baahday kadib dagaalkii ayaan-darrada ahaa ee Soomaaliya. Kasokow faa’iidooyinka kooban ee qurbaha laga helay, waxaa jira dhibaatooyin badan oo laga dhaxlay kuwaasoo qaarkood in badan laga hadlay. Dhibaatooyinka qaar waxaan la wadaagnaa dhamaan ajaanibta Galbeedka (iyo Barigaba) ku cusub, qaar kale waa kuwo aan la wadaagno Muslimiinta guud ahaan. Waxaase jira kuwo Soomaalida u gaar ah sida inaad waddamo badan ku arkayso carruur Soomaali ah oon ku hadli Karin Af-kooda Hooyo –Af-Soomaaliga. Waxaan tusaale usoo qaadan karaa inaan arkay carruur illaa 10 waddan ka kala timid oo dhamaan ajinabi ah Soomaalina ay ku jirto kulligoodna isku iskool dhigta inay qariib igu noqotay in kuwa kale sidii iyagoo waddankoodii jooga ugu hadlaan af-kooda halka kuwa Soomaalida ah ay ku adagtahay iskadaa inay ku hadlaan Soomaali e ay xataa ku adagtahay inay kuba fahmaan!!!
Dhibku intaas wuu ka weynyahay waxaanan aad usii walbhaaray kadib markuu Sheekh ka mida Culimada Soomaaliyeed nooga sheekeeyay nin darsin carruur ah oo uu dhalay kuna kala baahsanaa wadamo badan oo kala duwan uu go’aansaday inuu carruurtiisii kula wada kulmo Dalka Masar kadibna carruurtii laga waayay laba is af garata!!! Waxay noqdeen wax Swedish, German iyo Faransiis daldala iyo kuwo kale oo Af-Carabi iyo Amxaari ku xanta kuwa kale!!! Maalin maalmaha ka mida ayuu duqii carurta dhalay ka safray markaasay illeen awal isagaa ku kala dhex jiraye madaxa isla wada galeen oo af-labadii hal mara lagu dhawaaqay “war odaygii fiicnaa ee inoo kala turjumaani jiray xagguu aaday?” Walaalo is af-garan waayay sow wareer iyo wal-wal joogto ah kuma sugna!!!
Anigoo dhowr goor oo hore isku dayay bal inaan fahmo dhibaatadu inta ay le’egtahay ayaan shalay isugu yeedhay illaa dhowr iyo toban dhallinyaro ah kuwaasoo da’doodu u dhaxayso 11 illaa 17. Waxay ka mid ahaayeen da’yar aan isku dayo inaan si ay ka helayaan ugu faa’iideeyo. Sidii caadada noo ahayd ayaan su’aalo iyo jawaabo u galnay. Aniga ayay tooggadaydii noqotay inaan weydiimahayga soo bandhigo. Waxaan weydiiyay waxyaabo laga yaabo aqristoow inaad fududaysato ood la yaabto! Laakiin jawaabtii ay ka bixiyeen ayaa kugu filan inaad ii garawdo. Waxaan luuqaddii ay fahmayeen ku weydiiyay waxa af-Soomaaliga lagu dhaho Mahadsanid, Hambalyo, Nabadgalyo, Soo Dhawow iyo ereyo kale oon ka fogayn. Tirada weydiimahayga saxda uga jawaabay way ka yaraayeen 20%!!! Waliba waa marka aan jawaabta ku daro kuwa ag-dhigay ee laakiin aanan isticmaalin erayada kor ku qoran oo ulajeedkaygu ahaa. Qaar baa soo dhawow baddalkeedii ku jawaabay “Soo gal!!”
Iyadoo jaaliyaadka Soomaalida lagu dhalliilo inayna xil badan iska saarin tayaynta dhallinta ay magacooda xafiisyada ku furtaaan ayaa haddana inta aan fahamsanahay dhibka ugu weyni wuxuu ka imaanayaa waalidka oo gabay kaalintii barbaarineed ee carruurtooda. Heerka ay carruurtu kolba marayaan ayaa ka sokow bay’ada ay ku noolyihiin, waxaa saamaynta ugu weyn ee natiijadooda iska leh waalidka. Tusaale ahaan waxaan aaminsanahay carruurta imtixaankaygii yaraa ku baastay inay guryahooda kala yimaaddeen waxa ay kuwa kale ku dhaameen.
Waxaa niyad jab weyn aad kala kulmaysaa markaad aragto ilmo jecel inu afkiisa hooyo barto laakiin kuwii bari lahaa (waalidkii) ay kula hadlayaan af kale oo qalaad!!! Marka ilmuhu 3-dii meelood e ugu muhiimsanaa ee uu wax ka baran lahaa (kka. Guriga, Iskoolka iyo Goobaha ciyaarta) haddii aan fursad loo siin inuu afkiisa meel uun kaga hadlo siduu ku baran? Waa arrin mustaxiil ah. Waxaa intaa dheer iyadoo muddo kadib ilmuhu ay la qabsadaan inay ka maarmaan afkooda oo ay gaadhaan meel aan kasoo noqosho lahayn taasoo dhaxalsiisa inay ku sifoobaan Soomaali aan Af-Soomaali aqoon (waaba haddii dadka laga dhaadhicin karo inuu Soomaali yahay qof aanan Soomaali aqoon!!!) Nin adduun ku nooloow maxaa aragti kuu laaban!
Waxaa kale oo jira waddamada dhibkaasi ka jiro qaar oggol in iskoolada dadweynaha lagu baro carruurta af-kooda inay haddana nasiib darro tahay inayna jirin dad xirfad u leh barista Af-soomaaliga. Taasna eeddeeda dhamaanteen ayaa iska leh!! Kuwa fara ku tiriska ah ee barayaasha af-ka hooyo ka ah waddamada shisheeye dhab ahaantii iyagaaba u baahan in la baro af-Soomaaliga. Waxaan arkay macallin ardaygiisa halkuu/halkay ka bari lahaa/lahayd inay jiraan dhowr erey oo isku micne ah (kulligoodna af-Soomaali ah) uu/ay ka barayo/so in hal ray uun sax yahay (waa erayga gobolkiisa laga isticmaalo e) kuwa kalena khalad yihiin oo aynaba af-Soomaali ahayn. Kulligeen Soomaali baan nahay hal luuqad ayaana ku wada hadalnaa oo ah Af-Soomaali, laakiin lahjad iyo eray meelna ku badan meelna ku yar waa iska caadi oo addunkoo dhan bay ka jirtaa.
Ugu dambayntiina afkeennu inkastoo uu hodan yahay haddana ma wada naqaan oo miyigii uu asalku yaallayna waa laga yimid dugsiyadii lagu dhigan lahaana ma hayno! Waana sababta keentay in dad badan oo wariyeyaal sheeganaya ay sida joogtada ah ugu qoraan af-Soomaali khaldan oo aanba barasho dheeri ah u baahdeen sixiddiisu. Laakiinse qofku meesha ugu muhiimsan ee uu kusoo barbaaraa noloshiisa waa guriga. Marka waalidiinta xil gaar ah baa ka saran inay carruurtooda baraan afkooda hooyo. Danteenna ayaa ku jirta inaan ilmaheenna luuqaddooda barno, waxaana taas taageeraysa daraasad lagu sameeyay Sweden oo sheegtay ilmaha ugu fiican waxbarashada iskoolada inay yihiin isla kuwa ugu fiican ku hadalka luuqaddooda hooyo. Waana sababtaas tan keentay inay Sweden balaayiin koroner ku bixiso barista carruurta luuqaddooda hooyo (iyadoo sidoo kale balaayiin kale sannadkiiba ku bixisa barista Swedishka la baro ajaanibta waddanka kucusub inkastoo ay Dadka reer Sweden 100% ku hadlaan luuqadda English-ka!!!). Kulligen waxaa inala gudboon inaan afkeenna ilaalino sababtoo ah jiritaankeenna ayaa ku xidhan.
By: Abdulfatah Sheikh (bihiabdul@yahoo.com)